सल्लाह नोटरी अनलाइन
परामर्श को एक नोटरी अनलाइन
मान्छे आवश्यक कार्यहरू को तयारी मा विल्स, विषयहरूमा को उत्तराधिकारको, यो कार्यान्वयन को लेनदेन वा वकील को शक्ति
को प्रावधान को सेवाहरू देश मा लोकप्रिय छ । पछि सबै भिसा मदत गर्न प्राप्त अधिकार र आफूलाई जोगाउन अनावश्यक नतिजा को कानूनी मामिला हो । सेवा प्रदान व्यावसायिक सल्लाह को एक नोटरी सार्वजनिक को लागि मुक्त अनलाइन वा फोन गरेर मदत, जोगिन सम्भव त्रुटिहरू को कार्यान्वयन को कागजातहरू ।
समस्या जहाँ आवश्यक निःशुल्क परामर्श नोटरी
नियम प्रदान लागि दुई विकल्प को जटिलता को, नोटरी प्रदर्शन गर्दा कानूनी कार्यहरू: अनिवार्य सहभागिता र इच्छा को दल गर्न कानूनी सम्बन्ध छ । सल्लाह वेबसाइट मा
एक प्रश्न सोध्न एक नोटरी सार्वजनिक को लागि मुक्त अनलाइन र कि मामला मा, तपाईं चाहनुहुन्छ भने:
बनाउन सही वा परिवर्तन हुनेछ ।
विशेषज्ञ परामर्श बारेमा भन्नेछु वैधानिक आवश्यकताहरु को लागि तरिका र फारम को विल्स, नियम परिवर्तन छन् नै गरे आदेश. मुक्त नोटरी परामर्श फोन मा, तपाईं सिक्न हुनेछ को पहिचान हुनेछ अवैध र नियम परिवर्तन को अन्तिम हुनेछ । यो ज्ञान मदत गर्नेछ तपाईं को गर्न पछि सम्पत्ति मृत्यु भएको छ ।
बनाउन उत्तराधिकार छ ।
निःशुल्क परामर्श नोटरी अनलाइन मदत गर्नेछ तपाईं जान कहाँ थाहा छ भने तपाईं प्राप्त व्यवस्था छ । तपाईं सिक्न हुनेछ समय को प्रविष्टि मा अधिकार को अन्य शासकका, नियम को लागि आवेदन सदस्यता को उत्तराधिकार छ । यो तपाईं को लागि अनुमति हुनेछ सम्पत्ति अधिकार रक्षा मा मृत्यु को एक नजिक नातेदार छ ।
वकील को शक्ति.
लागि लागू गर्दा अनलाइन सल्लाह गर्न एक नोटरी सार्वजनिक (निःशुल्क) मा वेबसाइट, तपाईं कसरी सिक्न हुनेछ गर्न ठीक कार्यान्वयन वकील को शक्ति, कानूनी शक्ति र वैधता यो कागजात र अधिकार दिन्छ.
प्रमाणित गनु गर्न अनुबंध ।
व्यवस्था अनुसार, त्यहाँ छन् लेनदेन लागि आवश्यक जो
सोधेर को नोटरी सार्वजनिक अनलाइन र मुक्त को चार्ज मा हाम्रो सेवा, तपाईं पाउन छौँ जब बाहिर गर्न सक्छन् छैन एक अनुबंध साइन इन गर्न सन्दर्भ बिना को नोटरी कार्यालय. उचित सम्झौता मा को भुक्तानी भत्ता वा एक सम्झौता ।
साक्षी समानतालाई को प्रतिलिपि को मूल दस्तावेज हो ।
व्यवस्था प्रदान लागि परिस्थितिमा जब तपाईं आवश्यक प्रमाणित प्रतिलिपिहरू को बयान, पासपोर्ट, सर्टिफिकेट. संग कुराकानी व्यावसायिक मदत गर्नेछ तपाईं माथि आकर्षित गर्न कागजी लागि राज्य निकाय र संस्थाहरूको ।
स्थापना गर्न शुद्धता को अनुवाद मा रूसी भाषा छ ।
परिस्थिति जब तपाईं आवश्यक एक सरकारी को अनुवाद, मिसिलिकरण, पूरा छ भने, यो प्रक्रिया लागि दर्ता जमानत प्रदान संग वार्ता लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र विदेशी अमेरिका । ज्ञान को यो ऐन अनुमति हुनेछ, तपाईं सङ्कलन गर्न आफ्नो प्रश्न र जवाफ छ ।
जम्मा गर्न पैसा वा मूल्य छ ।
व्यवस्था अनुसार मा (लेख), नोटरी पसलहरु को मूल्य मा विशेष जम्मा खाता. कानूनी ज्ञान को यस प्रक्रिया तपाईंलाई मदत गर्नेछ सुरक्षित पैसा ट्रान्सफर, जमानत, कुराहरू नातेदार वा मित्र ।
राख्न कार्यकारी अभिलेखमा मा ऋण दायित्व हो ।
व्यवस्था मा (लेख) स्थापित कि कार्यकारी को मा कागजातहरू भनेर पुष्टि अधिकार को रूपमा प्रेरित एक तरिका ठीक गर्न एक ऋण जा बिना अदालत छ । व्यावसायिक सल्लाह नोटरी को लागि फ्री (फोन गरेर वा अनलाइन) अनुमति हुनेछ, तपाईं यस बारे सिक्न पैसा-फिर्ता विकल्प कुनै पनि बिना न्यायिक प्रक्रिया छ ।
प्रमाण प्रदान गर्न छ ।
प्रक्रियागत व्यवस्था अवस्था कहाँ प्रमाण को संरक्षण गर्न मद्दत गर्नेछ विचार गर्न एक अदालत मामला । खोजी सेवाहरू यस मामला मा रक्षा गर्नेछ आफ्नो सही गर्न को संरक्षण को गतिविधिलाई मा अदालत ।
निर्धारण गर्न समानतालाई को एक मानिस संग एक फोटो गर्नुहोस् ।
आधिकारिक पुष्टि बीच समानता को मानव र फोटो पठाउँदा फोटो अधिकारीहरूले मा मेल. द्वारा जारी नोटरी प्रमाणपत्र को पुष्टि को यस तथ्यलाई अनुमति हुनेछ, तपाईं समय बर्बाद छैन मा एक व्यक्तिगत भ्रमण गर्न कम्पनीहरु र मुद्दा गर्न आवश्यक कागजात ।
के हो डीएनए विश्लेषण